Zimbaboe: Zazakely 2 Taona Voafonja Anaty Efitrano Mitokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2018 16:40 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
[Fanavaozana: araka ny tatitra maika an'ny Associated Press, navotsotra tamin'ny 14 janoary i Nigel Mutemagau, saingy ireo ray amandreniny kosa mbola mifonja. Navoaka voalohany teo amin'ny Global Voices tamin'ny teny anglisy tamin'ny 13 janoary ity lahatsoratra ity, ny 15 janoary no navoaka tamin'ny tambajotra ny fandikàna azy tamin'ny teny frantsay]. Ity zazakely vao 2 taona ity, Nigel Mutemagau (Nigel Mupfuranhehwe no nahafantarana azy tamin'ny voalohany, anaran-dreniny), dia natoka-monina tao amin'ny efitrano iray famonjàna fanta-daza ao Zimbaboe, fonja tsara aro ao Chirurubi. Telo volana lasa izay, niara-nosamborin'ny Central Intelligence Organisation (CIO), polisy miafina ao Zimbaboe, i Nigel sy ny ray aman-dreniny, ary tsy nisy olona nahalala izay nanjo azy ireo hatramin'ny 24 désambra 2008, rehefa nipoitra teo anatrehan'ny tribonaly tao Harare renivohitra izy ireo, niaraka tamin'i Jestina Mukoko sy ireo mpikatroka hafa voasambotra [amin'ny teny frantsay].
Mety ho voampanga “ho nanangoa jiolahy mba handrodana ny fitondran’ Robert Mugabé” ireo ray amandrenin'i Nigel, fiampangana mitovy amin'ireo an'i Jestina Mukoko. Niarahan'ny rehetra nitsipaka ho toy ny tsy mitombina ireny fanambaràna ireny. Vao haingana, ny Filoha afrikàna tatsimo, izay miandraikitra ihany koa ny Fitantànana ny SADC (Fikambanana ho Fampandrosoana ireo firenana ao atsimon'i Afrika), mikasika an'ireo fiampangana ireo, dia nanambara fa: “Tsy mino izany mihitsy izahay.”
Ny fonja tsara aro ao Chikuruki [amin'ny teny anglisy, sahala amin'ireo rohy manaraka], izay itazonana an'i Nigel anaty efitrano mitoka-monina, dia fantatra amin'ireo fepetra famonjana mahatsiravina, na dia nandritra ireo fotoana tsara indrindra tao Zimbaboe aza . Kanefa, ankehitriny, vao mainka tena miharatsy izany. Tsy dia manana sakafo firy ho an'ireo voafonja rehetra akory ireo mpiandraikitra ny fonja. Sahala amin'ny sehatry ny asam-bahoaka rehetra ao Zimbaboe. Na eo aza izany toejavatra rehetra izany, manamafy ireo mpiandraikitra ny fonja fa nahazo baiko izy ireo mba tsy handray sakafo avy any ivelany ho an'ireo voafonja (na dia ankizikely aza izy ireny). Tsy misy fitsidihana azon'ny fianakaviana atao ho an'ireto karazana voafonja ireto, anisan'izany i Nigel, izay vao roa taona.
Kanefa izay tena mbola mampitroatra be, araka ireo tatitra nataon'ireo mpisolovava, dia nokapohana i Nigel tao am-ponja mba hampanekena ny reniny hanao sonia fiaikena heloka. Milaza ireo mpisolovava fa mila fitsaboana ilay zazakely.
Tao anatina fanambaràna an-gazety navoaka teo amin'ny blaogy This Is Zimbabwe, manome ny famintinana amin'ny antsipirihany ireo tranga sy ny ezaka nataon'izy ireo, ireo mpisolovava mba hahazoana fahafahana ho an'ireo voafonja ireo. Na izany aza, tsy nisy vokany hatrany ireo ezaka ireo hatramin'izao. Milaza io fanambaràna tamin'ny 30 Desambra 2008 io manao hoe:
Tamin'ny tolakandro, nankany amin'ilay fonja tsara aro aoChikurubi ireo mpisolovava niaraka tamina andianà mpitsabo. Hitan'izy ireo fa tsy notànana tao amin'ny toeram-pitsaboan'ny fonja akory ireo olona arovany, tsy araka ny baiko, fa nahiboka natoka-monina tao anaty faritra tsara ambina izy ireo. Nampiarahina tamina voafonja farany izy ireo ankehitriny, Violet Mupfuranhehwe, sy ny zanany lahikely vao roa taona, Nigel Mutemagau, izy ireo koa natoka-monina tao anaty faritra tsara ambina.
Nataon'ireo media mahazatra tsinontsinona mihitsy ny tranga nahazo an'i Nigel, izay ny raharahan'i Jestina Mukoko no tena nifantohana, ilay tena fantatra tamin'ireo mpikatroka voafonja. Mavitrika be kokoa ireo tambajotra sosialy manaraka ny raharahan'i Jestina Mukoko manokana, namoaka sary faneva iray misy laharana telefona iray ny ankamaroan'ireo blaogy zimbaboeiana, laharana izay azon'ireo mpamaky antsoina mba hanomezana vaovao mikasika ny fanjavonany. Marobe ireo vondrona niforona teo amin'ny Facebook, mitaky ny famoahana azy (manana mpikambana miisa 2 242 ilay iray tena malaza)
Mavitrika manokana ny blaogera Sokwanele amin'ny fandrisihana ireo mpamaky azy hiantso ny kaomisaria an'ny polisy iasàn'i Jestina mba hanontany izay nataony hahitàna azy.
Zara anefa raha nisy fifantohan-tsaina azon'ilay trangan-javatra mahatsiravina manjo an'i Nigel. Tao anaty blaogiko, nosoratako hoe: “zazalahikely iray tsara fanahy, toy io hitanareo eo ambony io, no gadraina fotsiny ao anatin'ny iray amin'ireo fonja izay tena malaza indrindra amin'ireo herisetra ao aminy ao Zimbaboe.[…]
Tena manahirana ny saina ny manidy zazakely roa taona anatina fonja tsara aro miaraka amin'ireo mpamono olona, mpanolana ary ireo mpanao heloka bevava sasantsasany faran'izay loza. Tsy fantatro hoe ahoana ny ho fanamarinantenan'ny governemantan'i Robert Mugabe amin'io raharaha feno habibiana io; fa tena misafoaka aho noho ireo fihetsika asehontsika, ny fahanginantsika, ary ny fiarahantsika mitsikombakomba ao anatin'izany.
Nankaiza ilay fahatsapanao te-hitroatra, ry Zimbaboe? Aiza ny maha-olona anao? Ao anatn'ireo tsanganana an'aliny voasoratra mikasika ny fisamborana sy ny fitsaràna an'i Jestina Mukoko, tena an-jorom-bàla, zara raha mendrika andalana vitsy monja, ilay raharaha mikasika an'io zazakely io izay vao manomboka mandeha. Matory ao izy, andro sy alina, amin'ny tany mangatsiaka amin'ny iray amin'ireo fonja izay tena malaza indrindra ao Zimbaboe, adinon'izao tontolo izao, izay mihiaka ho fanafahana vehivavy iray (Jestina) efa maherin'ny 50 taona.
Taorian'izay, nandefa fanagonantsonia teo amin'ny blaogiko manokana aho ho aterina any amin'ny lehiben'ny fampnanoavana ao Zimbaboe amin'ny zoma izao, hangatahana ny fanafahana an'io zazakely io sy hahazoany fitsaboana, ary koa ny fametrahana azy eny anivon'ny toerana misahana ny fikarakaràna zazakely.
Tao anatin'ny lahatsoratra misy ilay fanangonantsonia , nosoratako hoe:
Angatahako ianareo farafaha-ratsiny mba hanao zavatra kely: azafady, apetraho ao anaty faritra misy an'ireo fanehoankevitra amin'ity lahatsoratra ity ny an'Atoa. Tomana, lehiben'ny fampanoavana eto Zimbaboe, hitakiana aminy mba hanomezana haingana miaraka amin'ny vava an'io zazakely io ho any amin'ireo tomponandraikitry ny Asa misahana ny ankizy sy hanafahana azy amin'ny fonja.
Nandefa fanairana iray ihany koa aho teo amin'ny tambajotra sosialy Facebook, izay ahitàna vondrom-piarahamonina zimbaboeiana mavitrika tokoa (anisany amin'izany ireo nandao ny tanindrazany). Feno fanantenana aho. Tsy misy mihitsy fanamarinana, na amin'ny endrika inona na inona, hitazonana zaza iray amin'io taonany io ao anaty fonja, ao anatina efitrano mitoka-monina. Ny tanjona dia ny hanao fanentanana manodidina ny raharaha manjo an'io zaza tsy misy mpiaro io mba hanerena an'ireo tomponandraikitra hanao hetsika. Manana fahefana hanafaka an'io zaza io ny lehiben'ny fampanoavana ao Zimbaboe. Eny fa na dia mety hiaraka aminà fepetra hiteraka teritery amin-dreniny aza io fanafahana io, tsara kokoa izany noho ny mamela zaza iray izay vao miana-mandeha amin'ny toerana izay misy azy ankehitriny. Araka ny efa nolazaiko, manana fanantenana aho. Misy mpandray anjara ara-politika hafa matanjaka ao Zimbaboe izay izy ireo ihany koa dia manomboka mandinika ity raharaha ity, ary mino aho fa hatramin'ny zoma, hahazo vokatra mahafapo isika.